Mumbai sy ny horohoro: Ny ampitso · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Novambra 2018 4:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, srpski, English
Ao amin'ny Mumbai Metblogs, mamelatra ny zava-nitranga nandritra ny andro iray sy mihoatra i ideasmith.
Ao amin'ny Twitter, manome fanampim-baovao tsy tapaka i prempanicker. Raha ny heviny, dia maneho ny haavon'ny fikorontanana izany. Isaky ny adiny roa, misy ny karazana fanambaràna fa voafehy ny zava-drehetra, saingy avy eo, nisy ny tatitra momba ny fanafihana mitam-piadiana sy fipoahana maro.
code clicks n caffeine namoaka sary momba ireo roa andro farany – nalain'ny olona maro sy avy amin'ny loharano samihafa. John P Matthew nibilaogy mivantana momba ny zava-nitranga tany Mumbai, miaraka amin'ny fandinihana ny fihetseham-pon'ny olona sy ny fitantaran'ny haino aman-jery.
Kunal ao amin'ny Live's Short Live it Up mibilaogy mivantana tsy tapaka ihany koa -